माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगायो – Enayanepal.com
माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगायो
सुर्खेत, बैशाख १५ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सुर्खेतका सबै स्थानीय तहमा उम्मेद्वारहरुको टुङ्गो लगाएको छ । जिल्लाबाटै सबै ९ वटा स्थानीय तहका उम्मेद्वारहरुको टुङ्गो लगाएको माओवादी केन्द्र, सुर्खेतका संयोजक कृष्ण जिसीले जानकारी दिए । उम्मेद्वार छनौट समितिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिक ामा सबैभन्दा पहिले उम्मेद्वार छनौट गरेको थियो ।
वीरेन्द्रनगरको मेयरमा रत्न गाहा र उपमेयरमा हरिमाया शर्मा उम्मेद्वार रहेका छन् । यस्तै, भेरीगंगा नगरपालिकाको मेयरमा कृष्ण गिरी र उपमेयरमा डिलसरा थापाको नाम टुङ्गो लागेको छ । पञ्चपुरी नगरपालिकाको मेयरमा धनबहादुर वि.क. र उपमेयरमा सीता पाण्डेको टुङ्गो लागेको छ भने गुर्र्भाकोट नगरपालिकाको मेयरमा हिराबहादुर थापा र नन्दकली वि.क. उपमेयरका उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै, चिङ्गाड गाउँपालिकाको प्रमुखमा बा ेध बिक्रम जिसी र उपप्रमुखमा तेजकुमारी राना, बराह ताल गाउँपालिकाको प्रमुखमा बलबहादुर कठायत र उपप्रमुखमा गोमा गुरुङ उम्मेद्वार रहेका छन् ।
चौकुने गाउँपालिकामा खड्क विवश बासपाने प्रमुख र विमला जिसी उपप्रमुखका उम्मेद्वार रहेका छन् । सिम्ता गाउँपालिकामा झुपबहादुर बुढा मगर प्रमुख र चन्द्रकला खत्री उपप्रमुख, लेकवेसी गाउँपालिकामा खड्कबहादुर घर्ती मगर प्रमुख र आरति वि.क. उपप्रमुखका उम्मेद्वार रहेका छन् । लेकबेसीका उम्मेद्वार घर्ती पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सुर्खेतको क्षेत्र नं. १ बाट सभासद्का लागि उम्मेद्वार बनेका थिए ।
माओवादीले सुर्खेतका सबै गाउँपालिकाका वडाहरुमा पनि उम्मेद्वार टुङ्गो लगाईसकेको संयोजक जिसीले जानकारी दिए ।